Planeta Mubairo 2018: Isu tinoratidzira zano remabasa ekupedzisira. | Zvazvino Zvinyorwa
Dzvanya Musangano wePlaneta Mubairo 2018: Aya ndiwo gumi enganonyorwa pakati pawo anokunda uye wekupedzisira.
Nhasi, mutungamiri weboka rePlaneta uye juri re Planet Mubairo 2018 vakafumura zano re iwo gumi ekupedzisira enganonyorwa pamusangano wevatori venhau wakaitirwa kuPalacio de San Pau, umo Actualidad Literatura aivapo.
Gore rino 2018, dingindira remanyorerwo enganonyorwa rakatora kukosha kwakakosha mushure memakumi matanhatu neshanu eiyo Planeta Prize. Iyo Nhoroondo Novel uye yeVanhu Hondo inopa nzira gore rino kune enganonyorwa nevakadzi protagonists. Mune gumi vakapedzisa tinowana matikitivha enganonyorwa dzemarudzi ese (zvine kuseka, nesainzi fungidziro, zvepfungwa uye nhoroondo) uye nesainzi yekunyepedzera kupfuura nakare kose. Ndozvakaitawo ekupedzisira enganonyorwa:
1 Zvakanaka, naSandra Glaser (pseudonym)
2 Gender mhirizhonga yaPaulina Ayerza (pseudonym)
3 Tichitarisa Kudenga Rakanyarara, naElena Francis (zita rekunyepedzera)
4 Kumuka, naJames Sussex (pseudonym)
5 Unyanzvi hwekutiza, naDaniel Tordera.
6 Cherry Tree Shadow, naAriane Onna (zita rekunyepedzera)
7 Vakakundikana, naMaría Díez García
8 Hatshepsut's Mate (zita rekunyepedzera)
9 Angela naLeticia Conti Falcone
10 Anoda Chirikadzi Chirikadzi, naRay Collins (pseudonym)
Zvakanaka, naSandra Glaser (pseudonym)
Saga yemhuri inokurumidza. Nyaya yekurwira, kukunda uye kupona kwezvizvarwa zvitatu zvevakadzi vanobva kumhuri imwechete, vanoendeswa kupenga nechirume chine hutsinye, uye panomiririra munyori kuti anzwisise zvakapfuura kuti ayananise neazvino.
Gender mhirizhonga yaPaulina Ayerza (pseudonym)
Nhoroondo inodarika, ine nyaya dzevabonde uye kuguma kunotyisa. Mushure mekudzidza nezverufu rwemukadzi uyo aimbove rudo rwake rukuru, mupendi weArgentina anogara muParis anorondedzera nhamo yaakatarisana nayo nehukama hwakaoma hwehutongi nekurambwa kwevanhu kwakamiswa pakati pevaviri.
Tichitarisa Kudenga Rakanyarara, naElena Francis (zita rekunyepedzera)
Sci-fi inonakidza. Chiedza chisinganzwisisike, icho masayendisiti asingakwanise kuwana chero tsananguro, chinoonekwa mudenga. Nekudaro, mhedzisiro yacho inoratidza nekukurumidza: vanhu vakasiyana pasirese vanotanga kugoverana ndangariro, vanotambura hope dzinotyisa uye vanobatana kwehupenyu.
Kumuka, naJames Sussex (pseudonym)
Kumuka kunopenya kwemukadzi munyika yevarume vakanyura mukurwa kwesimba rezvematongerwo enyika uye vanofunga kuti hutungamiriri ndohwavo chete. Iyo protagonist ichaita nehunyanzvi kufambisa kuzadzisa zvinangwa zvake.
Unyanzvi hwekutiza, naDaniel Tordera.
Sci-fi dystopia umo vanhu vana vekare vanoziva vanomuka mukamuri yakavharwa ine bhokisi rimwe chete. Mukati, chivhorovhoro, mabara matatu netsamba, iyo inozivisa kuti mumwe chete wavo anogona kurarama.Vanofanira kubvumirana, kusarudza kuti ndiani achasara ari mupenyu ozviuraya zvinotevera.
Cherry Tree Shadow, naAriane Onna (zita rekunyepedzera)
Mutaundi riri munyika yeFrance yeBasque, chiitiko chinotyisa chinoitika chinokatyamadza munhu wese: Chii chinogona kutungamira mukadzi anoita seanofara kupedza hupenyu hwake nemwanasikana wake angori rinopfuura gore? Ichi ndicho chakavanzika chichaedza kuburitswa nemunyori, achitsvaga kudzipwa nekusurukirwa zvinorehwa nekuva amai.
Vakakundikana, naMaría Díez García
Nhau yevaviri vanopikisana mavara anoyambuka uye kupindirana ivo vasingazvizive. Iye, murume anorova nebasa uye uyo, kunze kwebasa rake raanoshamisira, anorarama hupenyu hwakajairika; iye, mutikitivha wepachivande anoongorora kusatendeka uye kuferefeta nyaya yemhondi.
Iyo Modernist Imba yeSan Pau: Chikamu chekuremekedza kuratidzwa kweyekupedzisira anoshandira iyo 2018 Planeta Prize.
Hatshepsut's Mate (zita rekunyepedzera)
Nhoroondo yekuongorora. Valencia, S. XVI: mukadzi anowana yepasi rese yekutanga chess codex. New York, XNUMXst century: chiremba anobatanidzwa mukutsvaga iyi codex. Iko kuferefeta kuchamuendesa kuValencia, uko kwaanozoona yake yakasviba yakapfuura uye yake yakasviba iripo.
Angela naLeticia Conti Falcone
Uyu munyori anonyanya kuzivikanwa anobuda muhunhu hwake hwese neyakajairika Raymond Chandler -style tsotsi inoverengeka. Rufu rwechidiki weUruguay, akazvipira kugadzirisa magwaro uye kunyora nhema nyaya, zvinoita kuti Commissioner Piedrahita adzokere pachiito, achiona kuti mukadzi uyu aive aine chepfu. Asi ndiani aive nechikonzero chekumuuraya?
Anoda Chirikadzi Chirikadzi, naRay Collins (pseudonym)
Nhema nhema ine kubata kwekuseka. YeArgentina imbwa inofamba inobatanidzwa mune iyo Nyaya Yechirikadzi, mutsivi uyo anouraya mahure vatengi. Anofungira vakadzi vakati wandei asi anopedzisira aona kuti hachisi chinhu kunze kwekuvharira mabhizinesi ane mumvuri akabatanidzwa nemukoma wake mushakabvu.
Ndeapi eaya mabasa achave anokunda uye wekupedzisira wePlanet Prize ya2018? Vachibhejera zvinhu zvinobvumidzwa. Mangwana Gumiguru 15, 2018, iro zuva raSaint Teresa, senge munaGumiguru wega wega kwemakore makumi matanhatu nemashanu, mukukudza Teresa, mudzimai wemuvambi, zvakavanzika zvichaziviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Makwikwi neMubairo » Planeta Mubairo 2018: Isu tinoratidzira zano remabasa ekupedzisira.